कला/साहित्य Archives - नेपाल दृष्टि
जुन रात सुत्दा तिम्रो तस्वीर सिरानी हुदैन त्यो रात मलाई कहिल्यै पनि बिहानी हुदैन तबसम्म भमराहरु दुर भइ बस्नेछन् जबसम्म फूलको सुन्दर जवानी हुदैन हामि नारी खुलेआम हिड्न सक्छौ हाम्रो गाउँमा किनकी त्यहा बजार हुदैन राजधानी हुदैन कसरी गर्छौ किसान गाउँघरमा खेतिपाती अचेल यहाँ पिउन समेत पानी हुदैन कोहि मरेरै मर्छन् कोहि बाचेर मर्छन् सबैको उस्ताउस्तै जिन्दगानी हुदैन ।। मायालु सबिना, धादिङ हाल : राजधानि
नेपाल आइडल-२ : अडिसनका लागि मिती र स्थान सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालको हालसम्मकै ठूलो गायन प्रतियोगिता नेपाल आइडलले लाखौँ दर्शकको मन जित्यो। नेपाल आइडलको मंच गायन क्षमता भएर पनि भित्र लुकिएरहेका नेपाली युवाहरुको लागि सुनौलो अवसर समेत प्रमाणित भयो। नेपाल आइडलको पहिलो सिजनको त्यो सफलतापछि नेपाल आइडल संचालन गरेको च्यानल एपी वान ले केहि समय अगाडी नेपाली आइडल-२ को पनि घोषणा गरेको थियो। घोषणा गरेको केही दिनपछि एपीवानले दोस्रो सिजनको लागि अडिसनको मिती र स्थान समेत घोषणा गरिसकेको छ। पहिलो सिजनमा नेपालका ७ वटा सहरबाट सम्भावित स्वरहरु चयन गरेको नेपाल आइडलले दोस्रो सिजनमा ६ वटा सहरबाट सम्भावित स्वर चयन गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तो छ अडिसनको मिती र स्थान तालिका : मिती स्थान २०७४ चैत्र ६ भैरहवा, जेसिस किन्डरगार्डेन हाइ स्कुल २०७४ चैत्र ११ धनगढी, सुदुरपश्चिम एकेडेमी २०७५ वैशाख ३ हेटौडा, सिद्धार्थ सेकेण्डरी स्कुल २०७५ वैशाख ८ धरान, विष्णु मेरोरि
झुपडीमा धेरै पस्छ आँधी तुफान भनेको निर्दयी र पक्षपाती हुन्छ भगवान भनेको पृथ्वीमा बिहान हुन घाम उदाउनु पर्छ तिमी म सङ्ग हुनु मेरो बिहान भनेको के गयो र ? तिमी गयौ सम्पत्ति गयो बा आमा गुमाउनु पो नोक्सान भनेको यसकारण मलाई चढ्ने रहर लाग्दैन हामी दुईलाई छुटाउने विमान भनेको यहाँ अँध्यारो अनुहारसङ्ग डराउनु पर्दैन ज्यानमारा हो ज्यानमारा मुस्कान भनेको।। कल्पना आचार्य ओली दमक, झापा
कसरी थाहा पाउने कसैले तपाईंलाई प्रेम गर्छ ?
प्रेम संसारमा सबैभन्दा मिठो अनुभूति हो । प्रेमिल जोडीहरु त्यही अनुभूति संगालेर बाँच्छन् । हो, प्रेम एक अनुभूति हो । जब कसैलाई मन पराइन्छ, मनमा बेग्लै झंकार पैदा हुन्छ । मन उथलपुथल हुन्छ । हामी कसैलाई माया गर्छौं, मन पराउँछौ भने, त्यही किसिमको माया पाउने अपेक्षा पनि गरिन्छ । आफुले जसलाई माया गरेको हो, उनले पनि माया गरोस् भन्ने चाहन्छौं । तर, कसैले आफुलाई माया गरिरहेको छ भनेर कसरी थाहा पाउने ? त्यसका संकेतहरु के हुन् ? पक्कै, जब कसैले आफुलाई पनि माया गर्छ भने त्यसका केहि संकेतहरु देखिन्छ । यस्ता संकेतका आधारमा हामीले निक्र्यौल गर्न सक्छौ कि, उसले आफुलाई कति माया गरिरहेको छ भन्ने कुरा । के हुन् त ती संकेतहरु, जानीराखौंः सामिप्यता खोज्ने जसलाई हामी मन पराउँछ, उनी पनि आफ्नो नजिक हुन खोज्छ भने यसलाई गि्रन सिग्नलको रुपमा बुझे हुन्छ । जब कसैसँग भावनात्मक सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै ज
डिभोर्सपछि पहिलो पटक मनोज गजुरेल स्टेजमा (भिडियो)
माघ १९ – सम्बन्धविच्छेद भएकाे दुई हप्तापछि हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेलले युएईमा प्रस्तुति दिएका छन् । सम्बन्धविच्छेदको पीडा बिर्सेर नियमित लयमा फर्कदै गजुरेल नेपाली कामदारलाई हँसाउन युएई आएका हुन् । श्रीमतीसँग अलग भएपछि पहिलो पटक आबुधाबीको स्टेजमा देखिएका गजुरेलले दर्शकको माया र सद्भावले सबै पीडा भुलेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘मान्छेको चोला जे हो त्यही होला । म कसैलाई केही भन्दिन । जे भन्नु थियो सामाजिक सन्जालमा आइसके’ मनोजले उज्यालोसँग भन्नुभयो । मनोज र श्रीमती मिना ढकालको गएको पुस ११ सम्बन्धविच्छेद भएको थियो । आबुधाबीस्थित अल अहलिया अस्पतालको हलमा मनोज गजुरेलको प्रस्तुति भिडियामा हेर्नुहोस् उज्यालो https://youtu.be/Y9YdCXfx1tM ++++
ऐश्वर्यले वीरेन्द्रलाई भनिन्, “आज किन–किन दीपेन्द्र केही बद्लिएको अनुभव भइरहेको छ”
शाहज्यादा पारसका कारण राजसंस्था र राजपरिवारको दिन–प्रतिदिन बदनाम भइरहेको महसुस राजा वीरेन्द्रले गरेका थिए । युवराज दीपेन्द्र र शाहज्यादा पारसबीचको घनिष्टताबारे पनि राजालाई जानकारी थियो । तर, आफूले भनेको दीपेन्द्रले मान्ने स्थिति नभएपछि राजाले दीपेन्द्रबाट पारसलाई कसरी छुटाउने भन्ने विषयमा सोच्न थालेका थिए । यस्तैमा एक रात शाहज्यादा पारसले चलाएको गाडीको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार गायक प्रवीण गुरुङको निधन हुन पुग्यो । यस घटनाका कारण पारसप्रति मात्र नभई राजदरबारप्रति नै जनआक्रोश बढ्न थालेको महसुस राजाले गरे । वि.सं. ०५७ (सन् २०००) को पुसमा राजा वीरेन्द्रले तात्कालिक मालेका नेता वामदेवलाई राजदरबारमा बोलाई विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने क्रममा पारसका कारण आफूहरुले व्यहोर्नुपरेको सास्तीबारे पनि ‘शेयर’ गरे । राजा वीरेन्द्रसँगको लामो तर सौहार्दपूर्ण कुराकानीपश्चात् वामदेव राजाको सहजताका लागि केही
Dec222017 by प्रदिपNo Comments
१५ सय तिरेर बेस्यालय पुगेका बाबुले आफ्नै छोरी भेटपछि
…ल आउनुस् … १२०० को माल ५०० मा … ल लानुस् सस्तोमा लुगा …ल लग्नुहोस् दुईटाको ४०० … यस्ता यस्तै आवाजहरूको कोलाहल भित्र म आफुलाई पन्छाउँदै थिए ( त्यो ब्यस्त सडक पेटीमा । प्रायः जसो ओहर दोहर गर्ने त्यो चिर परिचित बाटोमा यस्ता स्पस्ट अस्पस्ट आवाजहरू मेरा लागि पाच्य भईसकेका थिए । छरपस्ट रूपमा छरिएका सामानहरू बिक्री गर्न त्यहाँ सधैं त्यस्तै तछाडमछाड मचिन्थ्यो । मेरालागि त्यो स्वभाविक झैं लाग्थ्यो । त्यस्तै साँझ ६ बजे तिर म आफ्नो बाटो लाग्दै थिए, त्यतिकैमा एउटा आवाज मेरो कानमा ठोक्किन आईपुग्यो– अंकल… …म टक्क रोकिए र पछाडी फर्केर हेरे । अन्दाजी २३र२४ बर्षकी, हल्का निलो टाईट जिन्स पाईट, कालो टपक्क कसिएको लुगा, सर्लक्क परेको कपाल र गहुँ गारो अनुहार भएकी एक अपरिचित केटी, मलाई हेर्दै थिई । साँच्चै मैले चिन्न सकिन्, म टोलाई रहेँ… मास्कले आधा मुख छोपेकी ती केटी सँगैको रूखमा अढेस लिएर बोली– पन्ध्र सय म
महिनावारी हुनुअघिका बालिकाको ‘प्राइभेट अंग’ कसरी सफा गर्ने ? किन छ जरुरी?
सरसफाइ सबैका लागि आवश्यक छ। हाम्रो वरपरको वातावरण, खानपानका साथै शारिरीक सरसफाइ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। धेरैले नुहाउनुलाई मात्र सरसफाइ भन्छन्। तर, बाहिरी सफाइसँगै यौनांगको सफाइबारे धेरैले चासो राख्नैनन्। बालिकादेखि वृद्ध महिलासम्मले यौनांग सफाइ गर्ने तरिका र महत्वबारे बुझ्नु जरुरी हुन्छ। हामीले महिलाको यौनांगबारे कुरा गर्दै छौं। सरसफाइ छोरी जन्मेपछि नै सुरु हुन्छ। छोरी जन्मिएपछि नै आमाले कसरी सफाइ गर्ने भन्ने विषयमा थाहा पाउनुपर्छ। हामीले पहिला नै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, योनी सधैं सुक्खा हुनुपर्छ। हाम्रो समाजमा अझै पनि बच्चा जन्मेपछि तोरीको तेलले पुछ्ने चलन छ। जुन गलत हो । तेलका कारण पनि संक्रमण हुन्छ। शिशु छोरीको योनी सफा गर्दा मनतातो पानीमा कपास भिजाएर पुछ्नुपर्छ, किनकि त्यो भाग निकै कोमल र नरम हुने भएकाले सकेसम्म कपास प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि नरम मलमलको कपडाले मनतातो पानीले प
कथा – भ्रुँणहत्या
भावना पाठक आमा, म आज सात इन्च लामो भए । मेरो सरिरमा सबै अंगहरु छन् । सबै अंग चलाउन सक्छु । मैले तपाइको आवाज पनि चिन्न थालेको छु । तपाइको आवाज धेरै मिठो लाग्छ मलाई । तपाइको प्रत्येक आवाज संगै म आफ्नो कोमल हात खुट्टा हल्लाउने प्रयास गर्छु । तपाइको मुटुको धड्कन नै मेरो एकान्तको साथी हो र म हुनुको अर्थ हो । आज मैले मुस्कुराउन सिकें । तर अझै पनि म सानै छु,बाहिरको संसारमा म आफुलाई सर्मपण गर्न सक्दिन, मलाइ यहि न्यानो र सुरक्षित छ,तर पनि बाहिरको संसार कस्तो छ र कहिले हेर्ने भनेर म दिन गनेर बसेको छु । आमा म तपाइको सन्तान हु, सायद यो कुरा सुनेर तपाइ खुसि हुनुभयो होला म सदा तपाइलाइ खुसि देख्न चाहन्छु आमा, तपाइ रुँदा मलाइ साह्रै दुःख लाग्छ । म नि तपाइ संगै रुन्छु तर तपाइले मेरो आँसु देख्नुहुन्न । आजभोली त मेरो कपालहरु पलाउन थाले । एकदम नरम र छोटो छ मेरो कपाल् । म प्रायः समय कसरत गरेर बिताउछु,अहिले त
चन्चल स्वभावकी निहारिका रात्रिबस चढेर पे्रमी अनुरागको आग्रहमा उनले निम्तो गरेको स्थानतर्फ जाँदै थिईन् । लामो यात्रापछि बस एकाएक घ्याच्चककककक ..........रोकियो, “ इन्द्रसरोवर जाने बाटो आयो ल......... ल............ उत्रिनुस्” । कन्डक्टरको कर्कश स्वरले स्वप्निल दुनियाँमा हराईरहेकी निहारिका एक्कासी झल्याँस्स भईन् । हतार हतार सिटबाट उठ्दै आफ्नो झोला बोकेर बसबाट ओर्लिन् । अब उनले इन्द्रसरोवरको यात्रा तय गर्नु थियो । लामो याात्रामा उनि एक्लै थिईन् । बसबाट दुई जोडी युवा युवती पनि इन्द्रसरोवर को यात्राका लागी झरे । निहारिकालाई अलिक आधार भयो । मौनतालाई चिर्दै निहारिकाले आफ्नो कोमल हातहरु अगाडी बढाउँदै भनिन् “म निहारिका........सिन्धुलीबाट आएको” निहारिकासँग हात मिलाउँदै एक युवतीले भनिन् “म शीतल.......नजिकै रहेका एक युवकतिर ईशारा गर्दै उनि बोलिन् यी मेरा साथी बिराज हामी दुबै हेटौंडाबाट...... बिदाको आनन्